चीनले बनायो मानवरहित हेलिकप्टर, चीन-भारत सीमामा निगरानी गर्न प्रयोग गरिने
फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘माइ लभ’वाला म्यासेज आएको छ ?
काठमाडौँ । पछिल्लो केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज भाइरल बनेको छ । यो म्यासेजलाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरस भनेर समेत चर्चा गरिएको छ । तर, बास्तवमा यो नयाँ वर्षको शुभकामना दिनका लागि बनाइएको एउटा तरिका हो ।
नयाँ अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदै फेसबुक !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने विषयलाई समेत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा समावेश गरेको छ । पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएको र देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य सरकारले राखेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत बढावा दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको हो ।
डिजिटल प्रविधिमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण
ललितपुर । मुलुकको विभिन्न आठ जिल्लाका ४८ सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल माध्यमबाट अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षण भइरहेको छ । निम्नवर्गीय परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा सुधारका लागि सो शिक्षण प्रविधि अघि बढाइएको हो । ‘सूचना सञ्चार र प्रविधिमा आधारित अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण सिकाइ’ नामक उक्त कार्यक्रम गत वैशाखदेखि सञ्चालन गरिएको नेपाल अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकको सङ्घ (नेल्टा) ले जनाएको छ ।
डोल्पा । नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर कम हुँदा डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । जिल्लामा रहेका १३ टावरमध्ये छ स्थानमा स्याटेलाइट, पाँचस्थानमा माइक्रोवेभ र दुईवटा रिपिटर प्रविधिबाट सञ्चालन आएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको स्थानीय टेलिफोन नम्बर थाहा पाउन यसो गर्नुहोस्
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाटै आवश्यकताबमोजिम कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको स्थानीय टेलिफोन नम्बर थाहा पाउन सकिने भएको छ ।
रिचार्जरको एप डाउनलोड गर्नेलाई दुईवटा क्रिसमस क्याप निशुल्क
काठमाडाैँ । मोबाइल एप रिचार्जरले क्रिसमस अफर सार्वजनिक गरेको छ । एण्ड्रोइड तथा गूगल प्लेबाट रिचार्जरको एप डाउनलोड गर्नेहरुलाई रिचार्जरले दुईवटा क्रिसमस क्याप निशुस्ल्क उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बाटोको अवस्था थाहा पाउने सेन्सर जोडिएको टायर
एजेन्सी । टायर निर्माण कम्पनी पिरेलीले आधुनिक प्रविधिको सेन्सरको मद्दतले बाटोको अवसथा कस्तो छ भनेर थाहा पाउने टायरको निर्माण गरेको छ ।